Sina Vidiny fifaninanana HIEMT EMS vatana miady amin'ny hozatra elektrika manosika hozatra mampihena ny lanjan'ny milina mpanamboatra sy mpamatsy | LaserTell
Inona ny HI-EMT?
Fitaovana HI-EMT natao ho an'ny tanjona kanto, manana mpangataka 2 (roa) mahery vaika kokoa. Teknolojia avo lenta izy io ao anaty vatan'ny vatana tsy manafika, satria tsy hoe MANDRITSAKA ny FAT fotsiny, fa koa manangana MUSCLE.
Ankoatr'izay, ny fitsaboana dia tsy mitaky fanatoranana, fanamoriana, na tsy fahazoana aina. Raha ny marina, ny marary dia afaka mipetrapetraka sy miala sasatra, raha ny fitaovana kosa dia mitovy amin'ny maherin'ny 20.000 crunches na squats tsy misy fanaintainana.
teknolojia Famporisihana ny hozatra elektrika EMS
Rafitra fiasa Elektromagnetika mifantoka amin'ny avo lenta
fiteny Anglisy sy ny hafa
famohana Tanana 2
Zintin'aratra 110V / 220V 50-60Hz
Haben'ny fonosana 71 * 61 * 112CM
Ny vokatry ny HI-EMT
Ny fikarohana ara-pitsaboana dia mampiseho fa aorian'ny fitsaboana iray dia afaka mampitombo tsara ny hozatra 16% izany ary mampihena ny tavy 19% amin'ny fotoana iray. Fanatanjahan-tena ny hozatry ny kibo, famolavolana ny tsipika fitondra manao / fanatanjahan-tena ny hozatry ny valahana, mamorona ny valahana paiso / manazatra ireo hozatra mikatso ny kibony, ary mamolavola ny tsipika mermaid.
Ny fanatsarana ny hozatry ny kibony izay nanjary afaka noho ny rectus abdominis, ary ny famolavolana ny tsipika fitafiana dia mety indrindra ho an'ireo reny manana fitomboan'ny kibon'ny fitomboan'ny kibony ary ny kibo loaka dueto ny fisarahana an-kibon'ny rectus taorian'ny fiterahana.
Mba hampavitrika ny famerenan'ny collagen ny hozatry ny valanoranon'ny valanorano ambany, hamafisana ny hozatry ny valanoranon'ny pelvika, hamahana ny olan'ny fidiran'ny urine sy ny tsy fahazakana ary hahatratra ny fomba tsy mivantana ny fihenan'ny fivaviana.
Ny fanatanjahan-tena dia manatanjaka ny hozatra fototra, ao anatin'izany ny kibon'ny fotony lehibe (ireo vondrona hozatra fototra dia afaka miaro ny hazondamosina, mitazona ny fitoniana ny vatan-kazo, mitandrina ny corteabdominis ivelany oblique, internal oblique, transverse perutinis) ary ny gluteus maximus of thposture, manatsara ny fahaizan'ny atletisma ary mampihena ny vintana mety haratra, manome fanampiana ara-drafitra ho an'ny vatana manontolo, ary mamorona vatana tanora.
Previous: 2020 famoronana vaovao tsy manaparitaka hozatra mampihena ny tavy matavy hatsarana emsculpting HIMET milina
Manaraka: Anti-antitra Wrinkle Remover Face Lifting Radar Line RF Ice monopolar rf mihamafy hoditra
Vokatra asongadina, Sitemap, Laser Module 808, 3 amin'ny 1 Ipl, Jiro Flash Ipl Xenon, Laser Epilator Ipl, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina